Tokyo Show အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပုံစံအသစ်နဲ့အတူ အကြမ်းခံ တဲ့ပုံပေါက်လာတဲ့ Honda Fit ! – MyMedia Myanmar
Tokyo Show အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပုံစံအသစ်နဲ့အတူ အကြမ်းခံ တဲ့ပုံပေါက်လာတဲ့ Honda Fit !
မနှစ်က SEMA ကားပြပွဲမှာ တုန်းကတော့ 2021 Tokyo Auto Salon အနေနဲ့ Online Virtual Event အနေနဲ့ သာ ကျင်းပခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး ဂျပန် ကားထုတ်လုပ်ရေး အတော်များများကတော့ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နဲ့ မတူညီတဲ့ Aftermarket Tuning ထုတ်ကုန်တွေ ကိုပါ ထည့်သွင်း ပြသခဲ့ကြ ပါတယ်။ အဆိုပါ ထုတ်ကုန် တွေထဲမှာတော့ Speedster-Style Pickup Trucks တွေ နဲ့ TRD နဲ့ Modellista တို့လို နာမည်ကြီး Tuning တွေဆီကို ထုတ်ကုန် အသစ်တွေလည်း ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ Honda ဟာ ယခုနှစ် အတွက် အဆိုပါ ကားပြပွဲမှာ ပြသမယ့် နမူနာ အမျိုးအစား ၂ ရပ် ကိုတော့ အကြိုချပြလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှုရမယ့် ကားကတော့ 2022 Fit E: HEV Crosstar Custom လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ Subcompact Fit အမျိုးအစား ပါပဲ။ အထူး သဖြင့် အဆိုပါ ကားဟာ ဒုတိယမြောက် မျိုးဆက် Honda Fit ကို အခြေပြု ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ကာ မော်တာ ၂ လုံး တပ် Hybrid Engine နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုမြင်ရတဲ့ Concept အရတော့ အဆိုပါ SUV ဆန်ဆန် Crosstar Trim Level ကို ပိုမို အကြမ်းခံတဲ့ ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင် တစ်ရပ်ဆီကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မယ် ဆိုတာတော့သေချာနေပါပြီ။ ယခင်ရှိ ပြီးသား Crosstar Trim လိုမျိုး ပဲ အဆိုပါ Concept မှာ ဆိုရင် အနက်ရောင် အမိုး နဲ့ Pillars တွေ Roof Rails တွေ ၊ မြင့်မားတဲ့ အမိုးမြင့်တွေနဲ့ ရေစိုခံ ထိုင်ခုံသားတွေလည်း ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု မြင်ရတဲ့ Concept မှာတော့ Honda ဟာ CT 125 နဲ့ Hunter Cub တို့ နဲ့ ပူးပေါင်းကာ Chunkier All-Terrain တာယာတွေကို လည်း သုံး ပေးထားတာ တွေ့ရပြီး Yakima ရဲ့အမိုးတန်းတွေ အပြင် တံခါးတွေမှာ ဆိုရင်လည်း Plastic Cladding တွေကိုပါ ထပ်မံဖုံး အုပ် ပေးထားသေးတာ ကို တွေ့ရမှာပါ။ ကားမှာ ပါဝင် လာမယ့် Lamps အသစ် တွေ ကြောင့်လည်း အရှေ့ဘက်က Bumper အသစ်နဲ့ လိုက်ဖက်နေမှာ ဖြစ်သလို အဆိုပါ Bumper အသစ်ကဆိုရင်လည်း Honda-E ဆီက Inspire ယူကာ ဖန်တီးထားတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အခုလိုမျိုး ပြင်ဆင် ဖန်တီးလိုက်တာတွေ ကြောင့် အဆိုပါ Honda Fit ဟာ အသွင်အပြင် ပိုင်းမှာလည်း ပိုပြီး အကြမ်းခံတဲ့ ပုံစံပေါက် လာသလို ပိုပြီးလည်း ထုထည်ကောင်းကောင်းနဲ့ အသွင်ကို မြင်လာရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခြားသော တစ်ချို့ ကားတွေလို လမ်း ကြမ်း စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေ အထိတော့ မမျှော်လင့်သင့်တာ အမှန်ပါပဲ။ ကားရဲ့ အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ ပက်သက်လို့ တော့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ထားတာမျိုး မရှိသေးပေမယ့် Fit အမျိုးအစားအသစ် အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ခန့်မှန်းရမယ် ဆိုရင်တော့ အခု ကား အသစ်မှာလည်း 1.5 Liter Gasoline Engine ကို တပ်ဆင်လာနိုင်ပြီး လျှပ်စစ် မော်တာ ၂ လုံး ရဲ့ ပေါင်းစပ်အားနဲ့ အတူ 108 hp အထိစွမ်းဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ အဆိုပါ Honda Fit အမျိုးအစားတွေကို အမေရိကမှာ ဆက်လက် ထုတ်လုပ် ရောင်းချတော့မှာ မဟုတ်သလို ယခုလို စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Concept ကိုတောင် ဈေး ကွက်ထဲ တင်သွင်းတော့မှာ မဟုတ်တာပါပဲ။
အခု 2022 Fit E: HEV Crosstar Custom ကတော့ N-Van ရဲ့ Custom ပိုင်းဆိုင်ရာ တတိယ နေရာကို ရယူလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ တွင်းမှာ ရောင်းချနေတဲ့ Honda N-Van ကို အခြေခံကာ အဆိုပါ Concept ကား အနေနဲ့ Mobile Food Vans အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သလို အနီရောင်နဲ့ အဖြူရောင် ပေါင်းစပ်မှုအပြင် Stainless Steel ကိုယ်ထည်နဲ့ အမိုးပိုင်းမှာလည်း မီးအလင်းရောင် တွေ ပါဝင်လာနိုင် ပါသေးတယ်။ Honda ရဲ့ အဆိုအရတော့ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ဝါသနာတို့အကြား ချောချောမွေ့မွေ့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မယ့် ကားတစ်စီး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုကား ကိုတော့ Rolling Cafe လို ဆိုင်မျိုးလေး ဖွင့်ဖို့ အ ကောင်း ဆုံး ကားတစ်စီး ဖြစ်လာလိမ့်မယ် လို့တော့ မထင်မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဂျပန် ရဲ့ Kei Car အမျိုးအစားဝင် ကားတွေဟာ အခြားသော ကား အသေးတွေနဲ့ မတူပဲ အတော်လေး ကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာ ကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။ Honda အနေနဲ့တော့ အဆိုပါ စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းလှတဲ့ Concept တွေ ကို Virtual Event 2021 Tokyo Auto Salon မှာပဲ ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပွဲကတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ လ ၁၅ ရက် နေ့မှာ ကျင်းပသွားမှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Tokyo Show အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပုံစံအသစ်နဲ့အတူ အကြမ်းခံ တဲ့ပုံပေါက်လာတဲ့ Honda Fit ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-13T13:30:44+06:30January 13th, 2021|MYCARS MYANMAR|